:: My Little World ::: Opera 9.5 and Firefox 3
Posted by Nay Nay Naing at 7/09/2008 05:40:00 PM
ဟုတ်တယ်ဗျို့... ဘာဖြစ်မှန်း မသိဘူး.. ကျွန်တော့် ရုံးက စက်မှာလည်း Firefox3မှာ ဖောင့်တွေ Bold တွေ ဖြစ်နေတယ်။ Firefox3ကြောင့် ဖြစ်တာလားဆိုပြီး Firefox3ကို Uninstall လုပ်တယ်။ အယင် အဟောင်းလေးပဲ ပြန် Install လည်း ထူးမခြားနားပဲ။ စက်တိုင်း ဖြစ်လားဆိုတော့လည်း မဟုတ်ပြန်ဘူး။ အိမ်ကစက်ကျတော့ ဖြစ်ဘူးဗျ။
Opera နဲ့တော့ Try ကြည့်ဦးမယ်။
Share လုပ်တာ ကျေးဇူးပါ။
အော်ပရာ မကြိုက်ဘူး.. ခုထိ ဇော်ဂျီဖောင့်တွေကို ချက်မှာ ကဘောက်တိ ကဘောက်ချာ ပြနေလို့...။ ဥပမာ - အောက်ကမြစ်ကို ယရစ်ဝဆွဲဆိုပြီး ပြနေတာတို့...။နကို ဥ ဆိုပြီး ပြနေတာတို့... ဘယ်လိုမှ ပြင်လို့ မရဘူး...။ ကယ်လ်ဗင်ကတော့ Dun blame opera for yr stupidity ဆိုပြီး ချီးကျူး ထောပနာ ပြုသွားလေရဲ့...။ (သူက အော်ပရာ ချစ်သူကိုး...။)
နောက်တစ်ချက်က နေးတစ်ကို အော်ပရာနဲ့ မြန်မာစာရေးရင် အဆင်မပြေဘူး...။
အဲဒါနဲ့ ခုထိ အော်ပရာကို မကြိုက်သေးဘူး...။
င်္FireFox မှာတော့ နေနေ ပြောသလို စာလုံးတွေ အကုန် ဘိုးလ်ဖြစ်တာတော့ မကြုံသေးဘူး...။ ဟိုတဟ်လောက် ရိုက်ကလစ် နှိပ်လို့ မရတာက Adds On တွေကြောင့် ဖြစ်တာ...။ Adds On တွေ ဖြုတ်ချလိုက်တော့ အကုန် အဆင်ပြေနေတယ်...။
I don't see bold text in FF.
Something wrong in your FF config?
p.s: I know browsing with Opera is faster than FF. Cool!
It could be your Arial font in your machine. Try downloading Arial font file from here.
this link comes from
under External Links section.
I hope it solves :)
ကိုလူအေး >> ကျွန်မ စီမှာတော့ အလုပ်မှာသုံးတဲ့ ကွန်ပြူတာရော၊ အိမ်က ကွန်ပြူတာပါ နှစ်ခုလို အဲဒီပြဿနာတတ်တယ်။ ကိုလူအေး ကွန်ပြူတာမှ အဲ့ဒီ Bold ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာ ရှင်းလို့ ရသွားတဲ့ အခါ သတင်းပေးပါအုံး။ :) ကျွန်မကတော့ ခုတလော အလုပ်ရှုပ်ချင်၊ အချိန်လည်း မရတာကြောင့် လွယ်တာ၊ ရတာပဲ ပြောင်းသုံးနေလိုက်တယ်။
Ko Boyz >> Opera မှာ ဇော်ဂျီမြန်မာစာတွေ အကုန်အမှန် ပေါ်ပါတယ်။ တခြား သူငယ်ချင်းတွေ စီမှာလည်း ကောင်းကောင်းမြင်ရတယ် ပြောတယ်။ အခုသုံးနေတဲ့ Opera 9.51 နဲ့အရင် 9.5 မှာ ဘာမှ မပြောင်းထားဘူး။ သူ့ ရဲ့ Default အတိုင်း သုံးနေတာပါ။ ကိုဘွိုင်ဇ်စီမှာ ဘာလို့ပြဿနာတတ်နေတာလဲတော့ မသိဘူး။ Firefox က ကိုဘွိုင်ဇ်မှာလဲ ပြဿနာမတတ်၊ မျိုးကျော်ထွန်းစီမှလည်း ဘာမှမဖြစ် နေနေ့ ကွန်ပြူတာနဲ့ကိုလူအေး ကွန်ပြူတာတွေမှာမှ ထူးခြားနေသလို Opera ကလည်း ကိုဘွိုင်ဇ် တစ်ယောက်တည်းမှာမှ ထူးထူးခြား ဖြစ်နေတာများလား :D
Firefox3မှာ အရင် Firefox2မှာရတဲ့ Addon တချို့ မရတော့တာတော့ သိတယ်။ ဒါပေမယ့် Firefox Addon တွေကို အရင်ကလည်း သိပ်ပြီးသုံးလေ့ မရှိဘူး။
Myo Kyaw Htun>>
မျိုးကျော်ထွန်းစီမှာ ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ သွင်းထားတဲ့ Zawgyi Unicode မတူလို့ လား။ Font နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထူးထူးခြားခြား စက်မှာ သွင်းထားတာဆိုလို့ဒါပဲရှိတယ်။ အဲ့ဒီ Zawgyi Unicode ကလည်း ဘာမှန်းမသိဘူး။ သွင်းလိုက်ရင် ဘာတွေ သွားချိန်းမှ မသိဘူး။ အတော်လေး စိတ်ပျက်ရတယ်။
Firefox မှာလည်း Default Font ကို ZawGyi-One - Size 16 ပြောင်းထားတာပဲ ရှိတယ်။ တခြား ဘာမှ မပြောင်းထားဘူး။ Firefox ရဲ့ Default Font - Arial - 13 ပြန်ပြောင်းစမ်းကြည့်လည်း Bold ဖြစ်တာ ပျောက်မသွားဘူး။
ဒီနေ့ကွန်ပြူတာမှာ Comment မှာပေးထားတဲ့လင့်က Arial Font ကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး အင်စတောလုပ်၊ Computer restart လုပ်ပြီး ပြန်စမ်းကြည့်တယ်။ အဆင်မပြေဘူး။ Bold ဖြစ်နေတုန်းပဲ။ အိမ်ပြန်ရောက်ရင် အိမ်က ကွန်ပြူတာမှ ထပ်စမ်းကြည့်အုံးမယ်။ ထူးခြားရင် ပြောမယ်။ ကျေးဇူးပဲ။ :)
အခု အော်ပရာကို ၉.၅၁ ဗားရှင်း အပ်ပ်ဂရိတ်လုပ်လိုက်တော့ ဇော်ဂျီတွေ ကောင်းကောင်းပေါ်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း လက်တို့လိုက်ပါတယ်...။ ဘာဆက်တင်မှ မချိန်းပဲ ဒီအတိုင်း အပ်ပ်ဂရိတ် လုပ်တာပါ...။ အရင်ဗားရှင်းမှာတုန်းက ကောင်းကောင်းမပေါ်ခဲ့တဲ့ “န” အက္ခရာ၊ “ဥ” လို့လဲ ပေါ်ပေါ်ရာကနေ... အခု နိုင်ငံတော်ဆိုတာကို ရိုက်ရင် “ဥိုင်ငံတော်” လို့ မပေါ်တော့ပဲ “နိုင်ငံတော်” လို့ အမှန်အကန် ပေါ်နေကြောင်း ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ သတင်းပေးလိုက်ရပါတယ်...။ :D
Maung Yin Nga Tay said...
Don't blame FF on ur stupidity. I don't have that bold problem in my FF
Thursday, July 10, 2008 10:12:00 PM
Ko Boyz>> Opera 9.51 ကိုအသုံးပြု၍ အမှန်အကန် စာလုံးများကို မြင်ရပြီဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည့်အတွက် အထူးပင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်မိပါကြောင်း။
Maung Yin Nga Tay >> Firefox ကို Blame လုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရေးထားတဲ့ အရေးအသားကို အသေအချာ ဖတ်ကြည့်ရင် သိပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ သာ Firefox3နဲ့Original Airal Font သုံးရတာ အဆင်မပြေဘူးဆိုတာမျိုး ရှိနေရင် အင်တာနက်ပေါ်မှာ ဒီသတင်းက အတော်ကြီးကို နာမည်ကြီးနေမှာ။ Firefox ကလည်း ဒါမျိုးအဖြစ်ခံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မ ကွန်ပြူတာမှာ ဖြစ်တာ ကျွန်မတို့ သုံးတဲ့ Zawgyi Unicode ကြောင့်( ဒါကပဲ Arial Font ကိုပြောင်းတာလေ) တစ်ခုခု အဆင်မပြေလို့ဖြစ်တယ် ဆိုတာ သိသာပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး တခြားသူတွေလဲ ဖြစ်မဖြစ် (ZawGyi Unicode သုံးသူတိုင်း ) သိချင်တာရယ်၊ Opera နဲ့ဇော်ဂျီဖွန့် ကို မြင်နေရပြီဆိုတာ သိသာစေချင်တာရယ်၊ အဲ.. အဓိက အချက်ကတော့ ကျွန်မ ရေးချင်စိတ်ပေါက် သွားတာကြောင့် ဒီပိုစ့်ကို ရေးထားတာပါ။ တစ်ယောက်ယောက်များ ဒါမျိုးဖြစ်လို့ဘယ်လိုရှင်းတယ်ဆိုတာ နည်းပေးမလားဆိုပြီး အလွယ်လမ်းလိုက်တာလဲ ပါတာပေါ့လေ။
ကွန်မန့် တွေကြောင့် တချို့ လည်း ကျွန်မလို ဖြစ်ကြတယ်၊ တချို့ လည်း မဖြစ်ဘူးဆိုတာ သိသွားပြီး ဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ ပိုမှန်းလို့ ရသွားပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် "ကိုမောင်ရင်ငတေ" ရဲ့ ကွန်ပြူတာမှ ဘာမှ မဖြစ်ဘူးဆိုတာကို သတင်းပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျတော့မှာလဲအဲဒီပြသာနာရှိလို့ ဘယ်လို fix လုပ်ရမလဲသိရင်ပြောပြပေးပါလား
ကျွန်မ ဘယ်လိုရှင်းလဲ ဆိုတာကို
ဒီမှာ ပိုစ့်အသစ်ရေး ထားပါတယ်။ အဆင်ပြေပါစေ။
Format your machine and install Firefox first. :P
ဖောင့်တွေကြောင့်ပဲနေမှာ၊ အစ်မ။ FF နဲ့တော့ ဘာမှ မဆိုင်လောက်ဘူး။
Monday, July 14, 2008 12:51:00 AM
ဟုတ်တယ် firefox ကြောင့် မဟုတ်တာ သေချာပါတယ်။ ကျွန်မ အသုံးပြုနေတဲ့ ဇော်ဂျီယူနီကုတ် နဲ့ပြဿနာဖြစ်တာပါ။ ဟိုတစ်နေ့ ကပဲ စက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ ယူနီကုတ်ကို remove လုပ်ပြီး အသစ်ပြန်သွင်းလိုက်တာ အဆင်ပြေသွားပါပြီ။ :-)